Igbo Mass Readings for December 6 2021 | Catholic Lectionary
December 7, 2021 December 6, 2021 by lectionary
MỌNDE IZU ỤKA NKE ABỤỌ N’ OGE OLILE ANYA ONYE NZỌPỤTA
Dinwenụ, zọpụta anyị na njọ anyị ma mekwaa ka anyị zuo oke. Nụrụ ekpere anyị ma kwadokwaa anyị isoro n’emume iwereahụ nke Nwa Gị. Onye Gị na Ya dị ndụ, na-achị eze, n’ịdịkọ n’otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu, site n’ụwatụwa niile. Amen.
lhe Ọgụgụ nke mbụ – 35:1-10
Ihe ọgụgụ ewetara na akwụkwọ onye amụma Aịzaya:
Ka ịkpa na ala kpọrọ nkụ ñụrịa ọñụ, ka ala ọkpọọ nweta obi añụrị wee mịpụta ifuru osisi mara mma. Ọ ga-achawapụta nke ukwuu, were ukwe tie mkpu ọñụ. A ga enye ya otito nke Lebanọn, ebube nke Kamel na Sharọn. Ha ga ahụ otito nke Osebụrụwa anyị. Meenụ ka aka na esighi ike sie ike, ka ikpere na-ama jijiji sie ike.
Ụnụ ga-agwa ndi niile egwu na-atụ, “Obi sie ụnụ ike, ụnụ atụla egwu, lee Chineke ụnụ na-abịa ịbọrọ ụnụ ọbọ site n’ịkwụghachi ndị iro ụnụ ụgwọ. Ọ ga-abịa zọpụta ụnụ. Mgbe ahụ, anya ndị kpuru isi ga-emepe, ndị ntị chiri ga-anụ ihe. Mgbe ahụ onye ngwọrọ ga-awụli elu dịka ele, ndị ogbi ga-ekwe ukwe añụri. Mmiri ga-esi n’ọzara sọpụta, iyi ga-ejukwa n’ịkpa. Ala ọkpọọ ga-abụ ebe ọdọ mmiri, ala kpọrọ nkụ ga-abụ isiyi. Ebe obibi nkịta-ọhịa ga-aghọ apịtị. Achara niile ga-adị ka eriri na ụdọ. Ụzọ awara awara ga-adị ebe ahụ, a ga-akpọ ya ụzọ Nsọ. Onye adịghị ọcha agaghị esi ebe ahụ gafee. Ndị nzuzu agaghị eme ihe nzuzu ọbụla n’ebe ahụ. A gaghị enwe ọdụm ọbụla n’ebe ahụ, a gaghịkwa enwe anụọhịa ọbụla nke na-eyi egwu n’ime ya. Ọ bụ sọọsọ ndị a zọpụtarala ga-aga na ya. Ndị nke Osebụrụwa a gbapụtara agbapụta ga-alọghachi azụ, na-ekwe ukwe ọñụ na Zayọn, ha ga-enwe añụrị ebeebe n’onwe ha. Ha ga-enweta obi añụrị na nke ha. Iru uju na ịma ọsụ niile ga-agbafu n’ebe ha nọ.
ABỤỌMA NA AZỊZA: Ps: 85: 9-10. 11-12. 13-14.
Ana m ege ntị n’ihe Chineke, Onyenweanyị na-ekwu
ka ebube ya wee nọgide n’ala anyị. Azịza
Ịhụnanya na okwukwe amakụọla,
Ee, Onyenweanyị ga-enye anyị ọganaihu,
udo ga na-eso nzọ ụkwụ ya. Azịza
OZIỌMA – 5:17-26
Otu ụbọchị, mgbe Jesu na-akụzi ihe, ndị Farisii na ndị nkụzi iwu nọ ebe ahụ, ndị si n’obodo niile nke Galili, Judia na Jerusalem bịa, ike nke Dinwenụ dịnyekwaara Jesu ka o wee gwọọ ndị ọrịa. Ụfọdụ ụmụnwoke butere otu nwoke ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ n’elu akwa ya, ha chọrọ ụzọ ibubata ya n’ụlọ, dọba ya n’ụkwụ Jesu. Ebe ọ bụ na ha enweghị ike ibuba ya n’ime ụlọ ha meghee oghere n’elu ụlọ buda ya n’akwa ya n’etiti ebe Jesu nọ. Ma mgbe Jesu hụrụ okwukwe ha, Ọ sịrị, “Nwoke, a gbagharala gị njọ gị niile!” Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii bidoro jụba sị, “Onye bụ nwoke a na-ekwu arụ? Onye pụrụ ịgbaghara njọ ma ọ bụghị Chineke?” Mgbe Jesu matara ihe ha na ajụ, Ọ sịrị ha, “Gịnị mere ụnụ ji ajụ ajụjụ a n’obi ụnụ? Olee nke ka mfe, ị sị: ‘A gbagharala gị njọ gị niile, ka ọ bụ ị sị, ‘Bilie, were ụkwụ gị gagharịba? Ma iji mee ka ụnụ mara na nwa nke mmadụ nwere ike n’elu ụwa ịgbaghara njọ,” Ọ sịrị nwoke ahụ ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, “Ana m agwa gị, bilie buru akwa gị laba.”
Nwoke ahụ biliri ozigbo, buru ihe o ji edina ala lawa, na-eto Chineke. Ihe a tụrụ igwe mmadụ ahụ n’anya nke mere ha ji too Chineke sị, “Anyị ahụla ihe anyị na-ahụbeghị mbụ taa.”
Nna, site n’ihe niile I nyere anyị, anyị na ehunyere Gị achịcha na mmanya nke a. Ebe anyị na-efe Gị ugbu a, nara onyinye anyị ma were nkwa ndụ ebighi I kwere anyị gbaa anyị ume. Mezuoro anyị ihe ndị a site na Kristi Dinwenụ anyị. Amen.